Awood ma u leeyahay Madaxweyne Farmaajo inuu Joojiyo howlaha Baarlamaanka?. - Awdinle Online
Awood ma u leeyahay Madaxweyne Farmaajo inuu Joojiyo howlaha Baarlamaanka?.
Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo oo ay wehliyaan Ra’iisul wasaaraha Xukumada Xasan Cali Kheyre iyo ku xigeenkiisa Mahad Maxamed Guuleed Khadar ayaa Juun 22, 2020, kulan dhanka Internet-ka ah la qaatay Madaxdaxweynayaasha Dowlad-goboleedyada dalka iyo gudoomiyaha Gobolka Banaadir.
Kulanka oo ay gadaal ka riixayeen Xubanaha beesha Caalamka ayaa waxaa ka qayb galay Madaxweynayaasha Dowlad-goboleedyada Puntland, Galmudug,Hirshabeelle, Kuufur Galbeed iyo Jubbaland sitaas la mid Gudoomiyaha Gobolka Banaadir ayaa ka qayb galay shirka.
Shirka waxyaabaha la isku afgartay waxaa ugu muhiim sanaa 3 qodob oo kala ahaa in kulan ay isku yimaadaan Madaxda DFS iyo kuwa D.G, in Madaxweynaha Soomaaliya uu go’aamiyo goobta iyo waqtiga shirka iyo qodobla 3 aad oo ah in Lajoojiyo howlaha doorashooyinka la xariira ee wadaan Baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya.
Hayeeshee Baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya ayaa sii wata howshooda waxa la horgeeyay afar oo ay soo diyaariyeen guddiga dhamaystirka xeerarka doorashooyinka ,waxaana la ansixiyay laba ka mid ah halka laba kalana ka doodistiisa ay wali soco, haba jiro khilaaf soo kala dhexgalay labada aqal ee Baarlamaanka Faderaalka Soomaaliya.
Guddoomiyaha Aqalka Sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Caashi Cabdillaahi ayaa shalay sheegay in been abuur lagu sameeyey xeerarkii dhameystirka Sharciga Doorashooyinka ee Gudiga wadajirka labada Aqal ay soo diyaariyeen,Isla markaana mid aan aheyn in la hor geeyey Golaha Shacabka.
Dowlad-goboleedka Puntland oo war saxaafadeed culus ka soo saartay xaaladda siyaasadeed ee dalka, waxaana ay ku qaadacday Xeerarka doorashooyinka ee horyaala Golaha Shacabka, iyadoo walaac ka muujisay in aan la tixgelin is afgaradkii lagu gaaray kulankii dhanka qadka Internet-ka ee 22 bishan June ay yeesheen Madaxda DFS iyo DG, kaasoo ahaa in la joojiyo doodda Golaha Shacabka ee la xiriirta Xeerarka doorashada.
Dowlad goboleedka Jubaland oo difaacday falcelintii Aqalka Sarre ee xeerarka loo qaybiyey Golaha Shacabka ayaa ku baaqday in la hakiyo akhriska, ka doodista iyo coddeynta xeerarka ay soo gudbiyeen guddiga laba aqal ee Baarlamaanka Soomaaliya u saareen dhamaystir xeerka doorashooyinka dalka.
Sidda lagu sheegay war-saxaafadeed kasoo baxay xafiiska madaxweyne Axmed Madoobe, Jubbaland ayaanan aqbali doonin xeer doorasho oo kasoo baxa Golaha Shacabka oo aan laga talogelin daneeyeyaasha sida ku cad bayaanka.
Qoraalka ayaa lagu sheegay in Jubbaland oo aaminsan in qalqal siyaasadeed iyo dib-u-dhac weyn ay ka dhalan karto hadii xeerarkaas aysan marin nidaamkaas ay ku baaqeyso in laga wada shaqeeyo in la waafujiyo.
Sida ku cad bayaanada ka soo kala baxay Dowlad-goboleedyada Puntland iyo Jubbaland oo xulufo dhow ah waxa ay ka Cadaadis ku saarayaan Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo in uu joojiyo kulamada Baarlamaanka Soomaaliya ee la xariira sharciyda doorashooyinka dalka.
Hirshabeelle iyo Galmudug & Koofur Galbeed oo ay Madaxweynayaal ka yihiim xubno horay ugu tirsanaa Xakumada Ra’iisul wasaare Xasan Cali Kheyre ayaa wali soo saarin go’aanadooda la xariira sida ay u socdaan howlaha doorashooyinka dalka.
Dhanka kale Madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo ayaa ku casuumay Madaxweyneyaasha Dowlad Goboleedyada iyo Guddoomiyaha Gobolka Banaadir in ay kasoo qeyb galaan Shirka Golaha Amniga Qaranka oo ka dhici doona magaalada Muqdisho, kalankaasi ayaa lagu gaaridoonaa halka loo jahaynayo arimaha siyaasada Soomaaliya.
Hadaba Maxaa lagu yeelidoonaa Xeerarka ay anxiyeen Baarlamaanka Soomaaliya?.
Ilo xog ogaal ah ayaa sheegaya in Madaxda Dowladda Faderaalka Soomaaliya ay qorshaynayaan in la laalo xeerarka Baarlaamaanka isla markaana Madaxda Dowladda Faderaalka iyo kuwa Dowlad-goboleedyada dalka ay go’aan ka gaarayaan halka loo jahaynayo doorashooyinka dalka sidii dhacday sanadkii 2016-kii.
Sikastaba ha ahaatee, waa caado iyo dhaqan soo jireen in marka la gaaro xilliga kala guurka ama dhamaadka muddo xileedka Madaxda dowladda ay bateen eedeymaha, jawaabaha iyo shirarka iska soo horjeeda, balse xalka wuxuu ku jiraa wadatashi iyo is qancin.
Previous articleKulanka Golaha Shacabka oo laga cabsi qabo inuu hareeyo Buuq
Next articleXal aan ahayn Dagaal malagu xalin karaa muranka Masar iyo Itoobiya ee Biyaha Webiga Niil?.